5 khiyaano si loo kordhiyo keydinta jikada yar | Bezzia
5 khiyaanooyin si loo kordhiyo keydinta jikada yar
Maria vazquez | 08/06/2021 12:00 | Karinta
Jikooyinka yaryar waa kuwo dhib badan. Sidee boos looga sameeyaa wax kasta oo aan ugu baahanahay meel yar? Kordhinta keydinta ayaa fure u ah sameynta jikada mid shaqeyneysa karinta ayaa weli ah hawl aan ku raaxeysanay. Laakiin sida loo sameeyo?
Bezzia waxaan ku soo uruurinay taxane taxane ah weynee kaydinta jikada yar. Idinkana uma baahnid jiko maran si aad u awooddo inaad ku dhaqanto; hal-abuurnimo waxaad sidoo kale ku fulin kartaa iyaga jikada horay loo qalabeeyay. Ogow!
Kahor intaanan bilaabin adeegsiga khiyaanooyinka aan kula wadaagno, waxaan rabnaa inaad si cad u sheegto in haddii aad haysato waxyaabo ka badan meesha lagu kaydiyo, aanad waligaa ka heli doonin in jikadaadu hagaagto. Mudnaanta koowaad, ka takhalus waxa aadan isticmaalin si joogto ah wax walbana way fududaan doonaan.
1 Ka faa'iideyso dhammaan darbiyada
2 Yaree cabirka qalabka
3 Sharad miisaska laga saari karo
4 Wax kasta u diyaarso goob
5 Ku rakib albaabbada kala-baxa
Ka faa'iideyso dhammaan darbiyada
Ma leedahay derbi bilaash ah jikadaada? Ku rakib xalalka dabaqa-ilaa-saqafka taas oo kuu ogolaaneysa inaad sare u qaaddo booska lagu keydiyo. Isku dar xalalka keydinta xiran ee furan kuwa kuu oggolaanaya inaad gacanta ku hayso waxa aad isticmaasho maalin kasta. Xalalkaasi uma baahna inay noqdaan kuwo aad u qoto dheer; 20 sintimitir ayaa ku filan labadaba in lagu abaabulo dhalooyinka galaaska leh qamadiga, badarka, abuurka iyo dhir udgoon, iyo sidoo kale in lagu keydiyo qalabka yaryar, fijaannada ama koobabka.
Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa hore jikada si aad u hesho meel bannaan oo dheeraad ah oo aad ku abaabuli karto noocyada kala duwan ee maaddooyinka iyo maacuunta. A biraha birta ama shelf gaaban ayaa ku siin doona boos inta udhaxeysa worktop iyo golaha wasiirada sare waxyaabo badan oo aad moodeyso.
Yaree cabirka qalabka
Qalabka ayaa qaata qeyb weyn oo ka mid ah booska jikadayada. Si kastaba ha noqotee, tani maahan inay sidan ahaato; waxaan la qabsan karnaa cabirka qalabkayaga iyo cabirka jikadayada. Kala hormarinta waa furaha si loo doorto qalabka korontada ee aan ka maarmi karno ama aan yareyn karno cabir ahaan.
Mashiinka weelka dhaqaaleeyaa muhiim ma kuu yahay? Waxaa laga yaabaa inaad yareyn karto cabirkeeda adoo ku beddelaya inaad si joogto ah u xirato. Sidoo kale, haddii aadan karin karin, waxay u badan tahay inaadan u baahnayn afar cunto-kariye. Xitaa waad ka fikiri kartaa inaad sameyso foornada ama microwave-ka oo aad ka doorto foornada microwave, a qalabka labada shaqo. Isbadaladaan iyo kuwa kale sida yaraynta cabirka qaboojiyaha ayaa kuu ogolaanaya inaad ku raaxeysato meel badan oo aad wax ku keydiso.
Sharad miisaska laga saari karo
Sidee miiska kala bixidu nooga caawisaa inaan kor u qaadno keydinta jikada? Caadi ahaan markaan jikada qalajino waxaan ku qabanaa iyadoo la keydin doono mid ka mid ah darbiyada si miiska loo dhigo. Miis jikada yar yari had iyo goor isku laabanto. Si kastaba ha noqotee, maanta uma baahnin u dhiib darbi ka mid ah armaajooyinka miis la dhigo.
Miisaska la soo jiido ayaa beddel u ah miisaska isku laaban ee jikooyinka yaryar. Waxay ku dhexjiraan armaajooyinka jikada sida haddii ay ahayd gabal Tetris ah. Sidan oo kale, booska kaydinta ee loo baahan yahay in lagu bixiyo ayaa ugu yar.
Wax kasta u diyaarso goob
Qaab kale oo loo kordhiyo booska wax lagu kaydiyo ayaa ah in meel kasta loogu qoondeeyo shay kasta. Sidan oo kaliya ayaad ku sameyn kartaa u hagaajiso mid kasta oo ka mid ah golaha wasiirada ama khaanadaha si ay u xajistaan ​​alaabada ugu badan ee suurtogalka ah. Waxaad ku guuleysan kartaa tan adoo adeegsanaya xalalka laga saari karo, kuwa wax kala gooya ...
Si wanaagsan u cabiro armaajo walba, waxaad rabto inaad ku keydiso oo raadso xalal ku habboon si aad u hagaajiso. Maanta waxaa jira tiro badan dukaamada loogu tala galay abaabulka guriga taas oo aad ka heli doonto wax kasta oo aad u baahan tahay. Si aad u badan sidaa darteed waa inaad iska ilaalisaa inaad waalanto si aanad kharash badan u bixin.
Ku rakib albaabbada kala-baxa
Albaabada la fuulo waxay xalliyaan dhibaatooyin fara badan meelaha yaryar. Kaliya maahan inay fududeeyaan dhaqdhaqaaqa kuwan, laakiin waxay kuu oggolaanayaan inaad dhigatid kabadho halkaas oo leh albaabbo caadi ah aysan macquul aheyn in sidaas la sameeyo. Fiiri bakhaarrada sawirka kore! Waxaad u baahan doontaa 25 sintimitir oo qoto dheer si aad u sameysid qaab isku mid ah oo fudud oo raqiis ah iyo albaabbo lugeed.
Ma jeceshahay fikradaha noocan ah si aad u hagaajiso shaqada jikada? Ma yihiin kuwo wax ku ool ah adiga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Karinta » 5 khiyaanooyin si loo kordhiyo keydinta jikada yar
Sida loo sameeyo indhaha cagaaran
Koobka shukulaatada, kareemka iyo looska